နိုဘယ်ဆု အကြောင်းသိကောင်းစရာ - IT-KOKO
ကျွန်တော် အမေစုရဲ့ နိုဘယ်ဆု မိန့်ခွန်း ကို ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖို့ အကြောင်းဖြစ်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဘယ်သူမဆို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြား ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဝမ်းသားပီတိဖြစ်မိမှာပါ။ ဂုဏ်ယူမိတာကတော့ အမှန်ဘဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ လိုက်ရှာတော့ article တွေ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အားလုံးဖတ်လို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Nobel Lecture by Aung San Suu Kyi from hanmyohtwe on Vimeo.
အမေစုရတဲ့ နိုဘယ်ဆုက ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံသား တီထွင်သူနှင့် စက်မှု ပညာရှင် အဲလ်ဖရက် ဘနာ့ဒ် နိုဘယ် (Alfred Bernhard Nobel)မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော နိုဘယ်ဆု (၅)ဆု အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုဘယ်၏ သေတမ်းစာ အရ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို နိုင်ငံများ အကြား အင်အားစုများ စစ်ပြေငြိမ်းစေခြင်း၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ဖြစ်ခြင်း လျော့ပါးစေခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မြှင့်တင်သူ နှင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်သူတို့ကို ဤငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရန် ရေးသားထားခဲ့သည်။ ဆက်ရန်။
ဒါကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ရခဲ့တဲ့ လူတွေ စာရင်းပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ရရှိသူ အမျိုးသမီး ၁၂ ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီး အခြား နိုဘယ်ဆုများထက် အမျိုးသမီးဦးရေပိုများသည်။  ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို လူပုဂ္ဂိုလ် ၉၈ ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း ၂၀ ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကြားကာလအတွင်း နိုဘယ်ဆုမပေးသည်မှာလည်း ၁၉ ကြိမ်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ဆက်ရန်။
ဒါကတော့ နိုဘယ်ဆုရတဲ့ အာရှတိုက်သားများဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ဝ၆-မိုဟာမက်ယူနွတ် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ) Muhammad Yunus, Bangladesh
၂၀ဝ၃-ရှီရင်အီဘာဒီ (အီရန်) Shirin Ebadi , Iran
၂၀ဝ၀-ကင်ဒေးဂျုံ (တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ) Kim Dae Jung , South Korea
၁၉၉၆-ကာလော့စ် ဖီလီပီ ဇမ်မီနစ်ဘဲလို Carlos Filipe Ximenes Belo နှင့် ဂျိုဆေးရာမို့စ်ဟောတာ (အရှေ့တီမောနိုင်ငံ) José Ramos-Horta, East Timor
၁၉၉၄-ယာစာအာရာဖတ် Yasser Arafat, ရှီမွန်ပဲရက် Shimon Peres, ရစ်ဇတ်ခ်ရာဘင် Yitzhak Rabin (ပါလက်စတိုင်းနှင့်အစ္စရေး) Palestinian Authority , Israel
၁၉၉၁-အောင်ဆန်းစုကြည် (မြန်မာနိုင်ငံ) Aung San Suu Kyi ,Myanmar
၁၉၈၉-တင်းဇင်းဂျရတ်စို၊ ၁၄-ဆက်မြောက်ဒလိုင်းလားမား (တိဘက်)Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama Tibet
၁၉၇၉-မာသာ ထရီဆာ (အယ်ဘေးနီးယား-အိန္ဒိယနိုင်ငံ) Mother Teresa, Albania, India
၁၉၇၈-မိုဟာမက် အန်ဝါအယ်လ်ဆာဒတ် Mohamed Anwar Al-Sadat, မီနာကမ်ဘီဂင် Menachem Begin (အီဂျစ်နှင့်အစ္စရေး) Egypt and Israel
၁၉၇၄-အီစာကူဆာတို (ဂျပန်နိုင်ငံ) Eisaku Sato , Japan,
၁၉၇၃-လီဒတ်သို (ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ) LeDuc Tho ,Vietnam.
Noble Prize အောင်ဆန်းစုကြည်